प्रचण्डका कारण बुटवलमा गोली चल्यो, के छ अबस्था ? — Imandarmedia.com
प्रचण्डका कारण बुटवलमा गोली चल्यो, के छ अबस्था ?
काठमाडौ। रुपन्देहीको मोतिपूर औद्योगिक क्षेत्रमा गोली चलेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी समूह र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरीले गोली चलाएको छ। प्रहरीले गोली चलाउदा केही घाइते भएका छन्। रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले प्रहरीले गोली चलाएको पुष्टि गरे।
औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी समूह र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरीले गोली चलाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले बताए। घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहको प्रजिअ तिवारीले बताए।
प्रशासनले अतिक्रमण भएको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाबाट स्थानीयलाई हटाउन खोज्दा तनावको स्थिति सिर्जना भएको हो । प्रहरीले राति १ बजे घर घेराउ गरी स्थानीय ३१ वर्षीय हिमाल रानालाई पक्राउ गरेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्।
बुटवल वडा नं १७ र १८ मा पर्ने औद्योगिक क्षेत्रको नदी उकास क्षेत्रमा गत सातादेखि ठूलो संख्यामा अस्थायी टहरा बनाएर जग्गा अतित्रमण भएको थियो। प्रशासनले तीन दिनदेखि रातिमा टहराहरु भत्काइदिँदै आएको थियो । तर, त्यसरी पनि अतिक्रमित जग्गाबाट स्थानीय हट्न नखोजेपछि प्रहरीले आज बल प्रयोग गरेको हो।
जग्गामा गत चैतमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्याश गर्दा स्थानीयले विरोध गर्दै ढुंगामुढा गरेपछि कार्यक्रम बिथोलिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार चुनाव अगाडि सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने दाबी गरेका थिए।
नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भूमि आयोग बनेको र आफ्नो दलले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लिएको बताएका थिए।
यसैगरि, प्रहरीका अनुसार बुटवलमा अर्को गोली काण्ड मचिएको छ। बुटवलको मिलनचोकस्थित एक होटेलमा गोली चलेको छ । गोली लागेर एक जना घाइते भएका छन् ।बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ८ सुख्खानगरस्थित कलश होटलमा बसेका चार जनामध्ये काठमाडौं महानगरपालिका ठेगाना भएका राकेश न्यौपानेलाई गोली लागेको हो।
चिउँडोमा गोली लागेका उनलाई उपचार गर्न लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पुर्याइएको छ। रुपन्देही प्रहरीका प्रवक्ता सत्यनारायण थापाका अनुसार उक्त होटेलमा गैंडाको खाग तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरु बसेको सूचनाका आधारमा आइतबार बिहान नौ बजेतिर सादा पोशाकका दुईजना प्रहरी रेकी गर्न गएका थिए।
प्रहरीले चार जना बसेको कोठामा चुकुल लगाइदिएर थप प्रहरी बल बोलाएको थियो। त्यसपछि कोठामा बसेकाहरुले ढोका फोडेर प्रहरीको पेस्तोल खोसेर गोली चलाएको रुपन्देही प्रहरीका प्रवक्ता थापाको भनाइ छ। सोही क्रममा न्यौपाने घाइते भएको थापाले बताए।
प्रहरीले होटेलबाट लेकबेंसी नगरपालिका सुर्खेतका भक्तबहादुर थापा र जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका ७ का कर्णबहादुर राउतलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। चारजना मध्येका एक विरेन्द्रबहादुर सिंह भने भाग्न सफल भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरुको साथबाट एउटा खागसमेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।
बुटवलमा कर्फ्यू आदेश जारी: बुटवलको मोतिपुर क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक सूचना जारी गर्दै आइतबार ४ बजेदेखि मोतीपुर क्षेत्रमा क’र्फ्यू आदेश जारी गरिएको जनाएका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडानम्बर १७ र १८ मा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र (करिडोर)को अति’क्र’मण हटाउने क्रममा झ’ड’प भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन गो’ली चलाएको थियो । झ’ड’पमा ६ जना घाइते भएको जनाइएको छ ।
‘जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ र १८ मा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसाल्ने योजना बनाएकोमा विगत केही दिनदेखि सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाई आएकोमा स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने साथै सर्वसाधारणको शान्ति सुरक्षाको अवस्थासमेत जोखिममा पर्न सक्ने देखिएकोले शान्ति सुरक्षालाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन ऐन २०७८ को दफा ६ (क) को अधिकार प्रयोग गरी आज मिति २०७८ साल असोज २४ गते दिनको ४ बजेदेखि अर्को सूचना जारीसम्मका लागि देहायको चारकिल्ला तोकी कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचित गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
यसै गरि , नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले न्यायपालिका सरकार गठनमा जोडिनु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताएका छन्। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरसांसद गजेन्द्र बहादुर हमाललाई शुक्रबार मन्त्री नियुक्त गरेकोतर्फ इङ्गित गर्दै नेता सिंहले यस्तो बताएका हुन्।
नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २२ ले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले हमालको नियुक्तिलाई लिएर झण्डै तीन महिनापछि पूर्णता पाएको सरकारप्रति उठेका प्रश्नलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताए।
गत चुनाव अगाडि आईजीपी प्रकरण र प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोगबाट पनि कांग्रेस नेतृत्वले पाठ नसिकेको भन्दै नेता सिंहले भने, न्यायपालिका सरकार गठनमा जोडिनु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो। सरकारले यतिका दिन लगाएर पूर्णता पाएपछि उठेका गम्भीर प्रश्नमाथि ख्याल ख्याल सोच्नु हुँदैन।
कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री सिंहले पार्टी भित्रका केही मान्छेहरुका गलत कार्यको सिंगो पार्टीले मूल्य चुकाउनु परेको बताए। पदमा बस्नेले आफूखुसी गरिरहेको र जनतालाई आफूहरुले जवाफ दिनुपरिरहेको भन्दै नेता सिंहले गलत कुराको विरोध गर्दा आफ्नै नेतालाई खुलाउने काम गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गरे।
पार्टी भित्रको एउटा समूहले सुरुदेखि नै गणेशमान र मंगलादेवी सिंहको नामबाट राजनीति गर्यो भनेर आफूविरुद्ध भ्रम छर्न खोजेको पनि उनले बताए। बाबु–आमाको नामबाट होइन, सामान्य कार्यकर्ताले जस्तै विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीतिक कार्यकर्ता बनेर, दुःखकष्ट र संघर्ष गर्दै, जेलनेल भोगेर अगाडि आएको हुँ,’ नेता सिंहले भने।
अरुजस्तो जागिर खाएर, व्यापार व्यवसायमा लागेर रिटार्ड लाइफ बिताउन राजनीतिमा आएको होइन। आगामी १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा लागेपछि नियोजित रुपमा आफूविरुद्ध गलत प्रचार गर्न थालिएको उनको भनाइ छ।
उनले पहिले पार्टीको महाधिवेशन गरेपछि मात्रै आम निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखे। लोकतन्त्र बचाउन कांग्रेस बलियो हुनुपर्ने र बलियो कांग्रेसका लागि अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने उनले दोहोर्याए। सत्तामा जाने एक जना, त्यसको लाभ लिने एक थरी अनि त्यसको जवाफ हामीले दिनुपर्ने ?
उनले भने, ‘बेलैमा महाधिवेशन गरेर इलेक्सनमा जानुपर्छ। अवसर पाएर काम गर्न नसक्नेहरुको गुणगान गाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने जमातका कारण पार्टी र लोकतन्त्र कमजोर बनेको भन्दै उनले गलत कुरालाई आफूले कहिल्यै सही भन्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
तेस्तै , प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भिम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नैतिकता देखाउने आँट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेता रावलले ट्विटरमा लेख्दै प्रम देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणामाथि टिप्पणी गर्दै यस्तो लेखेका हुन्।
उनले गजेन्द्र हमालले उद्योग मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको प्रसंगलाई उठाउँदै प्रधानमन्त्री देउवा, गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु र प्रधानन्यायाधीश राणाले नैतिकता देखाउने आँट गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘व्यापक विरोध पछि मन्त्री गजेन्द्र हमालले त राजीनामा दिए अब निजलाई मन्त्री बनाउने प्रम देउवा, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले नैतिकता देखाउने आँट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? निहित स्वार्थमा विधि, प्रणाली र नैतिकता मिच्नेहरूले नै देशलाई संकटतर्फ धकेल्दै आएका छन्।